Iingubo zentombazana eziphathekayo zinyuka ngonyaka wama-2016.
Isambatho sinomsebenzi omkhulu kunanoma iyiphi enye impahla yangaphandle: inceda umfazi ukuba ahlaziye aze ahlaziyeke nakwisimo sezulu ebanda. Kukho inamba enkulu yeendlela ezahlukeneyo kunye nemodeli, eya kuthi ngexesha elide ithandwa ngokukodwa ngabaqulunqi. Kodwa ngokwabo ingubo ayifuni kwimoya ixesha elide, okwenza kube yimpahla yendalo yonke, ingakumbi ekuqaleni kwentwasahlobo. Ngaba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi imodeli eya kufakelwa kulo nyaka? Emva koko sinikela ngembonakalo yezinto ezintsha zokugqibela zeengubo zabesifazane zentwasahlobo ka-2016.
Ingubo yowesifazane entwasahlobo 2016: izitayela ezidumile
Kwimizila ethandwayo ingaqatshelwa ngokukhawuleza, ukulungiswa nokulula (ukuchaneka, okuyi-A) kunye nokusetyenziswa kwesiqhelo solu hlobo lwezixhobo zokugqoka - i-drape, uboya, i-tweed, isikhumba.
Ukutshatyalaliswa okungafunekiyo ngexesha lonyaka we-spring - isambatho kwisitayela esiphezulu. Isitala sale ngubo ikhululekile ngokukhululekile, nto leyo ikhululekile kwaye iyasebenza. Ngokukodwa kwimeko iya kuba yinto ephezulu yengubo ye "style minimalism": uyilo lugqithise ngokungqongqo kwaye lwenziwa kwisikimu sombala ovalwe.
Iifoto zeengubo zamakhwenkwekazi ezisezingeni elihle, intwasahlobo yonyaka we-2016
Ingubo yengubo ye-2016: ifoto, abafazi
Iimodeli zeengubo, entwasahlobo 2016: iifoto zabasetyhini
Musa ukuphuma kwimo festile kule ntwasahlobo kunye neengubo zoshishino ezivela kwiindwangu zendoda. Siyakwamkela umzobo weendwina ngendlela yomthi weKrisimesi, umkhombe waseScotland kunye ne-goose paw. I-real pulul of freshness of natures will be a kimono coat. Xa ukhetha ingubo enjalo, khetha ukukhanyisa imvula yamanzi. Bafanele babe ngaphantsi kweedolo, baxinise ngeenxa zonke ezinqeni kwaye babe ne-pastel shades.
Iimpawu zengubo zentwasahlobo zonyaka we-2016: iifoto, ezipheleleyo
Ingubo yefestile yonyaka ka 2016: iifoto zeengubo zamakhosikazi
Kodwa umkhonto ongcono kakhulu wenkathi entwasahlobo ka-2016 iya kuba yinto yokubuyisela - ukubuya kwama-60 no-80. Imfashini yinkqubo, ngoko akukho nto inokumangaliswa kukuba izitayela zeminyaka edlulileyo ziphinda zithande iipaldium zehlabathi. Iifom ze-cut and volumetric, iibhande ezibanzi kunye nama-classic silhouettes, amahlombe amakhulu kunye namapokethi amakhulu. Okukhethiweyo ngokukhethekileyo lo mthombo uza kuba yingubo yengubo. Le nguqu encinci yengubo yeklasi kunye namaqhosha iye yanqoba nayiphi na intliziyo yesibini kunye ne-silhouette yayo eqhelekileyo.
Ngokumalunga nobude, entwasahlobo ka-2016 ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwengubo ye "maxi". Nangona kunjalo, kuyafaneleka ngakumbi kumantombazana okukhula komzekelo. Amantombazana abancinci abancinci abancinci bancomeka ingubo yobude obude, efanelekileyo ukugqoka izicathulo eziphezulu.
Umlinganiselo wemibala yeengubo zowesifazane ka-2016
Ngentwasahlobo ka-2016 i-shadow shades iya kuhlala ibumnyama, imhlophe kwaye imhlophe, ekulungele ukuguqa kwansuku zonke, kwaye njengendlela yokukhetha. Nangona kunjalo, entwasahlobo ufuna into entsha kunye neyona nto ibonakalayo. Ngoko ungazithobeli kwaye ubeke ingqalelo kwengubo ye-shadow shades: i-pink, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka. Ukukhetha iingubo eziqaqambileyo, ukhethe okukhethiweyo kwiimodeli ezizimeleyo-zikhangele ngakumbi kwaye zikhangeleke kakhulu.
I-Classic isoloko ikwaziwayo: indlela yokukhetha kunye nokokugqoka isambatho sesibini
Ukujonga umzobo kunye neyona nto ayikho imfuneko yokuba ube ne-wardrobe enkulu. Kwanele ukufumana izinto ezisisiseko ezi-3-4 zomgangatho ophezulu kwisitayela seklasi. Ngokomzekelo, thengela ingubo yeklasi, leyo entwasahlobo ka-2016 kwakhona kwimeko. Malunga nendlela yokukhetha kunye nento yokudibanisa le modeli yengubo yesibini kwaye iya kuxutyushwa kwinqaku lethu.
Abamemezeli bee-shades abanamathuba aya kuba apho bahamba khona ukuhamba. I-Pastel ethatywayo kunye ne-beige tones igxininisa ngokugqithiseleyo imodeli enezambatho ezinomfazi. Ewe, musa ukulibala malunga neyintandokazi yonyaka we-spring-obomvu. Ingaba nayiphi na umthunzi, ukusuka kumbala obomvu kwaye uphela nge-currant. Kodwa ngokugqithiseleyo kuya kuba yingubo yombala othe tye kakhulu ngo-2016 - iMarsala.
Abaqulunqi befestile abazama ukuveza abantu babo ngokuzeleyo baya kuncedwa ngamaprints. Ngethuba lokusondeza kwentwasahlobo ka-2016, kufuneka libe likhulu kwaye likhulu. Iipateni zobulwanyana zihlala zifanelekileyo: idiza, ingwe, inyoka. Baphinde bancintisane nezinye iingubo: izibalo zejometri, iipateni zeentyatyambo, iibhloko ezimibalabala.
Ingubo egqibeleleyo yowesifazana kwintwasahlobo yonyaka ka-2016: ukhetho lwezithombe
Yintoni enxiba ngayo iingubo eziphathekayo entwasahlobo ka-2016
Ngentwasahlobo abaphini bee-stylists bacebisa ukudibanisa iingubo kunye neentlobo zesetyhini. Umzekelo, nakweyiphi iingubo ezifanelekileyo ezibhothwayo eziphezulu, izitokisi okanye izicathulo zakudala ezinesibopho sezinwele. Isambatho esifutshane siyakubonakala sikhulu kwi-duet eneengubo ze-trapezoidal okanye imeko yokugqoka. Iimodeli zeemoto ezide kunye nexesha elide zicetyiswa ukuba zigqoke izinto ngeendlela eziqhelekileyo: ibhulukhwe kunye nejee, iingubo ezide, iingubo zokugqoka. Ngokuphathelele izesekeli, lo mthombo kufuneka ube njengento elula kwaye elula njengoko kunokwenzeka. Khetha izikhwama eziphathekayo zobukhulu obuphakathi, amabhande omnyama omnyama, iiglavu zesikhumba zangaphambili.
Konke malunga neeshini zeesitokisini
Ugqoke ngeendiza zepolka
Indlela yokukhetha ibhatyi yasebusika
Ukulungiswa kokubonwa komfanekiso
I-Linen yokulungiswa komfanekiso
Indlela yovuyisana nabahlobo abangaqhelekanga kunye nabo osebenza nabo
Unyango olungagqirha kunye nophenyo lweemvumba ze-varicose
Izonyango zemvelo zokuzinakekela
Umntwana kuphela kwintsapho
Ukuhleka kwentsuku efanelekileyo ye-brunettes
Eyelashes ezihlambulukileyo: njani, kutheni kwaye kulungile ngani?
Izitya ezilungileyo ezivela kwimveliso eqhelekileyo